Pakistan oo maanta xusaysa maalinteeda xoriyadda iyo Hindiya oo iyana berri u dabaal degi doonta | Entertainment and News Site
Home » News » Pakistan oo maanta xusaysa maalinteeda xoriyadda iyo Hindiya oo iyana berri u dabaal degi doonta
Pakistan oo maanta xusaysa maalinteeda xoriyadda iyo Hindiya oo iyana berri u dabaal degi doonta
daajis.com:- Waddanka Pakistan ayaa maanta u dabaal degaya sanad guuradii 70′ ee ka soo wareegatay maalintii uu noqday dal xor ah oo ka madax bannaan boqortooyadii Ingiriiska ee gumeysan jirtay 14 Agoosto 1947-kii.
Maanta oo isniin ah ayaa waddanka Pakistan laga xusayaa taariikhdaasi qiimaha leh, iyadoo Ingiriiskuna ahaa midkii dal weyne Boqortooyo Hindiya ka talin jirtay u kala jaray laba (Hindiya iyo Pakistan 1947).
Calanka Waddanka Pakistan ayaa lagu xiray jidadka, guryaha dhaadheer iyo xafiisyada dowladda, iyadoo dadka deggan xuduudka Pakistan ay mac macaanka la cuno is dhaafsanayaan maanta dadka deriskooda ah ee Hindiya.
Maalinta berri oo Talaado ah ayaa waxaa iyana Waddanka Hindiya oo xoriyaddiisu maalin ka dambeysay dariskooda Pakistan uu isna xusi doonaa maalintiisa xuriyadda, waxayna ku beegnayd maalintii Hindiya noqotay dal xor ah 15 Agoosto 1947-kii.
Ra’iisul Wasaaraha Hindiya Narendra Modi ayaa berri la filayaa in uu khudbad u jeediyo qaranka xilli xiriirka iyaga iyo dalka muslimka ah ee ay deriska yihiin ee Pakistan uusan sidaa u sii wanaagsanayn.